डेउला-निनबर्ग हाम्रो ज्ञान तपाईंको सफलता हो! - आलु प्रणाली
в फ्रेमहरू, Trend / Trends
आज रूसमा कसैले वस्तुगत रूपमा कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा विशेषज्ञहरूको अभावको कुरा मात्र होइन, तर समग्र ग्रामीण इलाकामा पनि कर्मचारीको अभावको कुरा गर्न सक्छ। उही समयमा, कृषि मेशिनरी र प्रविधिहरूको द्रुत विकासको लागि अकुशल कर्मचारीहरूबाट समेत ज्ञान र सीपहरूको एक निश्चित सेट आवश्यक छ।
अलेक्ज्याण्डर झारोव, डेउला-निएनबर्ग GmbH को CIS देशहरूमा परियोजना विकास विभाग प्रमुख
रसियामा कृषि शिक्षा प्रायः विशिष्ट सैद्धांतिक प्रकृतिमा हुन्छ, धेरै स्नातकहरूलाई सुरुबाट व्यावहारिक काम सिकाउनु पर्छ। र कुनै पनि तहमा प्रशिक्षणको अभावले उच्च समय र वित्तीय लागत निम्त्याउँछ।
यद्यपि यदि हामीले वस्तुस्थितिमा स्थितिको आकलन गर्‍यौं भने यो समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिको हो। यसको एक तरिका DEULA-Nienburg प्रैक्टिकल प्रशिक्षण केन्द्र (Deutsche Lehranstalt फर Agrartechnik) द्वारा प्रस्ताव गरीएको छ। यसको स्थापना १ 1926 २। मा भयो। आज डेउला-निएनबर्ग जर्मनीमा आफ्नो प्रकारको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक संस्था हो। केन्द्रमा 9, ००० मिटर भन्दा बढी छ2 प्रशिक्षण र उत्पादन सुविधाहरू, २ 250० भन्दा बढी साझेदार उद्यमहरू छन्।
केन्द्रका सेवाहरू दुबै व्यक्तिगत विशेषज्ञहरू र संगठित समूहहरू द्वारा पुन: प्रशिक्षण र पुन: प्रशिक्षणको लागि निर्देशित प्रयोग गरिन्छ। आज, कृषि उत्पादकहरूले उन्नत प्रशिक्षणलाई उनीहरूको व्यवसायको विकासमा एक प्रभावकारी लगानीको रूपमा लिन्छन् र विभिन्न सेमिनार र पाठ्यक्रमहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिन्छन्।
प्रशिक्षणको अवधि विद्यार्थीको स्तर र आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ: सर्तहरू एक दिनदेखि एक वर्षमा फरक हुन्छन्। प्रशिक्षणको अनुमानित लागत - प्रति दिन २०० यूरोबाट (यसले प्रशिक्षण समावेश गर्दछ, केन्द्रको होटेलहरूमा आवास, खाना र क्युरेटर-अनुवादक द्वारा समर्थन)। कोर्सको अन्तमा, विद्यार्थीहरूलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणपत्र जारी गरिन्छ।
यस केन्द्रले निम्नलिखित क्षेत्रहरुमा विशेषज्ञहरुलाई प्रशिक्षण दिन्छ: बाली उत्पादन, पशुपालन, कृषि मेसिनरी, जैव उत्पादन, तरकारी उब्जनी, रसद, व्यवस्थापन।
कृषिको क्षेत्र मा सबै प्राविधिक नवप्रवर्तन केन्द्रको दर्शन को क्षेत्र मा पतन। कार्य भनेको छोटो समयमा धेरै नै माग भएका विशेषताहरूमा मानिसहरूलाई प्रशिक्षण दिन र सबैभन्दा पहिले उनीहरूलाई सबै आवश्यक व्यावहारिक सीपहरू स्थानान्तरण गर्नु हो।
मानक कार्यक्रमको उद्देश्य कृषि प्रविधिको अधिकतम उपयोग र संसाधन संरक्षणमा पेशेवरहरुलाई शिक्षित गर्नु हो। यदि आवश्यक भएमा, प्रत्येक पाठ्यक्रम (वा विद्यार्थीहरूको समूह) को लागि व्यक्तिगत कोर्स प्रोग्राम विशेष रूपमा विकसित गरिन्छ। अत्याधुनिक प्रविधिमा विशेषज्ञहरूलाई प्रशिक्षण दिन केन्द्रले अस्थायी प्रयोगको लागि कृषि मेशीन र उपकरणको हस्तान्तरणका लागि निर्माण कम्पनीहरूसँग सम्झौता गरेको छ।
केन्द्रका क्षमताहरूले पनि अग्रणी अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरूबाट उच्च योग्य विशेषज्ञहरूको लागि उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सम्भव बनाउँदछ। यो ती कर्मीहरू हुन् जसले राम्रा आधुनिक प्रविधिहरू बुझ्दछन् र ठूला उत्पादनमा आविष्कार गर्दछन्।
डेउला-निएनबर्गले रूसी कृषि उत्पादकहरुलाई जर्मनीमा तालिम लिन आमन्त्रित गर्दछ तर विश्व परिस्थिति र ग्राहकहरुको चाहनालाई ध्यानमा राखी साझेदार उद्यमहरुको आधारमा रसियाको कुनै पनि कृषि दिशामा पाठ्यक्रमहरू तयार गर्न तयार छ।
हामी तपाईंलाई डेउला-निनबर्गको शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा देख्न पाउँदा खुसी हुनेछौं!
टैग: २०२० №१फ्रेमहरूप्रशिक्षण सत्रहरूप्रशिक्षण